Eikyarkwe tweyakyoneyashatatlaytwe1 by san aye 563 views
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး-မေ့အိပ်မက် by san aye 267 views
မြန်မာနှင့်ဥဒေါင်း - စောမုံညင်း by san aye 279 views
Mg kaung-htike-01 by san aye 793 views
ဖူးစာရှင် (မင်းလူ) by san aye 339 views
လရောင်ရွှမ်းမြသော-ဒဂုန်တာရာ by san aye 192 views
1. mmcybermedia. com ttqqddyyff xifvif; typing - ngwezinyaw
2. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 1 A. J. Cronin’s THE JUDAS TREE ((((စာပေဗိမာန်ထုတ်စာပေဗိမာန်ထုတ်စာပေဗိမာန်ထုတ်စာပေဗိမာန်ထုတ် ပြည်သူ့လက်စွဲစာစU်ပြည်သူ့လက်စွဲစာစU်ပြည်သူ့လက်စွဲစာစU်ပြည်သူ့လက်စွဲစာစU်))))
3. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy88222ချစ်သမီးသို့ချစ်သမီးသို့ချစ်သမီးသို့ချစ်သမီးသို့ • ဆရာဝန်ဆိုတာ လူတွေကို ဆေးကုဖို့ AများAကျိုး ဆောင်ရွက်ဖို့၊ • ဆရာဝန် Aတတ်သင်ပြီးမှ လူAများရဲ့Aကျိုး မဆောင်ရွက်ဘဲ စီးပွားရှာနေရင် ဘယ်လိုဖြစ်တတ်သလဲ၊ • ငွေဟာAဆိပ် ဂုဏ်ဟာAဆိပ် လူ့စည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာ Aဆိပ်၊ Aဆိပ်သင့်တဲ့Aခါမှာ ဖြေဆေးဟာ သစ္စာတရား၊ သစ္စာပျက်ယွင်းသူတို့မှာ ကုရာနတ္ထိ ဆေးမရှိ။
4. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy88223သော်တာဆွေသော်တာဆွေသော်တာဆွေသော်တာဆွေ၏ Aမှာစာ၏ Aမှာစာ၏ Aမှာစာ၏ Aမှာစာ ((((၁)၁)၁)၁) ထင်လင်းသည် စာရေးခြင်းဖြင့် Aသက်မွေးသူမဟုတ်ချေ။ Aင်္ဂလိပ်စာပြ (Aလွန်ပညာသင်) ကျောင်းဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မဂ္ဂဇင်းများတွင်လည်းကောင်း၊ လုံးချင်းစာAုပ် Aဖြစ်နှင့်လည်းကောင်း သူ့ဝတ္ထုတွေ စU်တစိုက်တွေ့နေရသည် မဟုတ်ချေ။ သူသည် စာပေဝါသနာ ပြင်းပြသူဖြစ်သော်လည်း ဝမ်းရေးAတွက် စာရေးသူမဟုတ်မူ၍ သူ့စိတ် မေAာင့်Aည်းနိုင်သော Aခါမှသာ ဝတ္ထုတိုရှည်များ ပေါ်ထွက်လာတတ်သည်။ စင်စစ် သူသည် စာရေးခြင်းထက် စာဖတ်သည့်ဘက်မှာ Aားများနေသည်။ စာဖတ်ရာမှာလည်း သူ့Aခြေခံပညာနှင့် သူ့Aသက်Aရွယ်Aလျောက် တော်ရုံတန်ရုံစာမျိုး မတိုးတော့ဘဲ ကမ္ဘာ့Aဆင့်Aတန်းမြင့်မြင့် စာများမှသာ သူမွေ့တော့သည်။ ယင်းသို့ သူ့စာပေAာဟာရကို သူသုံးဆောင်နေရာမှ Aကြင်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို သူကြိုက်နှက်လှသည် ဖြစ်လာသောAခါ သူမနေနိုင်တော့။ ထိုဝတ္ထုကို မြန်မာစာဖတ် ပရိသတ်Aတွက် Aပင်ပန်းခံကာ ဘာသာပြန်ပါတော့သည်။ ယင်းသို့ သူဘာသာပြန်ခဲ့သည်များမှာ ‘ပေါ်လီယာနာ’ သည် သုံးကြိမ် ရိုက်နှိပ်ခဲ့ရသည်။ ‘မောဂ္ဂလိ’ သည် ဘာသာပြန် စာပေဆုရခဲ့သည်။ ယခု A. J. Cronin’s THE JUDAD TREE ဝတ္ထုသည် မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လက်ထဲ ရောက်လာပြန်လေပြီ။ေA ဂျေကရိုနင်သည် A င်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်သည်။ A ပေါစားဝတ္ထုမျိုးတွေဖြင့် ရောင်းပန်းလှနေသူ မဟုတ်။ A ထက်တန်းကျကျ စာပေများဖြင့် A င်္ဂလိပ်စာပေနယ်တွင် နာမည်ကြီးနေသူ ဖြစ်သည်။ ယခု သင် ဤစာAုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်ပေတော့မည်။ ((((၂)၂)၂)၂) စာAုပ်ကောင်းတွင် A သက်ဝိညာU်ရှိ၏။ A ကြင်စာAုပ်ထဲရှိ A ကြောင်းA ရာတို့သည် A ကြင်စာရေးဆရာ၏ တွေ့ကြုံကြားသိ ခံစားမှုနှင့် ယုံကြည်ယူဆချက်များကို သူ၏စာရေးခြင်းA တတ်ပညာဖြင့် A သက်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပေရာ ယင်းစာAုပ်ကို ဖတ်သောA ခါ ထိုစာရေးဆရာ ဖန်တီးထားသော ဝိညာU်များက သင့်Aား ကိုယ်ထင်ပြခြင်း၊ စကားပြောခြင်းများ ပြုပေလိမ့်မည်။ သင်သူတို့ကို သုံးသပ်ပေရော့၊ သူတို့၏ A ကောင်းA ဆိုး A ကြောင်းA ကျိုးကို ဆင်ခြင်ပေရော့။ စာAုပ်ကောင်းတို့မည်သည် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၊ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ ဘာသာတစ်ရပ်A တွက် မဟုတ်ပေ။ လူတိုင်းA တွက်ဖြစ်၏။
5. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy88224သင်စာဖတ်ရာ၌ သတိထားစရာ Aချက်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ် Aကြံပေးလိုသည်။ ကမ္ဘာ့ စာပေပညာရှင်များ ပြောကြသည့် Aင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Poetic Justice ဆိုသောစကားရှိသည်။ မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရလျှင် ‘စာဆို၏ တရားစီရင်ချက်’ ဟု ဆိုမည်။ Aဘယ်Aရာနည်းဆိုသော် စာရေးဆရာကောင်းတို့မည်သည် မိမိဝတ္ထုထဲမှ ဇာတ်ကောင်များကို ကိုယ်ဖန်တီးထားAတိုင်း သူတို့စရိုက်Aလျောက် ပြုမူ လှုပ်ရှားစေပြီးနောက် ဝတ္ထုဆုံးသောAခါ၌ Aကြင်ဇာတ်ကောင်၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှုလိုက်၍ ထိုဇာတ်ကောင်နှင့် ထိုက်တန်သော ပြစ်ဒဏ်ကို ချတတ်ရသည်။ ************
6. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy88225ဘာသာပြန်သူ၏စကားဘာသာပြန်သူ၏စကားဘာသာပြန်သူ၏စကားဘာသာပြန်သူ၏စကား ကုသိုလ်ကံ Aခိုက်Aလှည့်မသင့်သည့် တစ်ချိန်က ကျွန်တော် တွေ့ကြုံခဲ့ရသော Aဖြစ်ကို မမေ့နိုင်ေAာင်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်သည် AစိုးရAမှုထမ်းAဖြစ်ဖြင့် Aလုပ်Aလွန်များသော ရုံးတစ်ရုံးတွင်ရှိစU် Aထက်Aရာရှိ လုပ်သူကလည်း တကယ့်ဗျူရိုကရက်ဆိုး Aထက်ဖားေAာက်ဖိလူမျိုး၊ စိတ်ဓာတ်ကညံ့ဖျင်း Aချင်းချင်း ညှာတာမှု မရှိသူ ဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရောလူရော ပင်ပန်းကာ မကျန်းမမာ ဖြစ်ရပါတော့သည်။ ကျွန်တော်၏ မိတ်ဆွေများက တိုက်တွန်းသဖြင့် ကျွန်တော်လည်း Aလုပ်မှခွင့်ယူရန် လျှောက်လွှာတင်ကာ ရွှေဘိုဆေးရုံသို့ သွားပါသည်။ လူကလည်း တကယ်မကျန်းမာသဖြင့် ဆေးရုံပေါ်သို့ လူတွဲ၍တင်ရသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် ဆေးရုံတက်ခွင့်မရ။ ဆရာဝန်ကြီးက ကုလားလူမျိုး၊ Aနည်းဆုံး မုန့်သေတ္တာ တစ်ပုံးလောက်ဖြစ်ဖြစ် သူ့Aိမ်သို့ ပို့မှ ဆေးကောင်းကောင်းကုသည်။ ဆေးရုံတက်ခွင့်ပေးသည်ဟု ပြောကြသည်။ ထိုAခါက ဆေးရုံများမှာ ယခုဆေးရုံများမှာကဲ့သို့ ခုတင်နှင့်သူနာ မမျှသည့်ပြဿနာမျိုး မရှိ။ ကျွန်တော့်မှာ လူကလည်းမမာ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေကလည်း များသဖြင့် “နေမကောင်းလို့ ဆေးရုံတက်တာ သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ ပေးရမှာလဲ” ဟုဆို၍ ဘာမှမပို့ခဲ့။ ညနေဘက်တွင် ကျွန်တော် ဆေးရုံပေါ်က လူတွဲ၍ဆင်းခဲ့ရသည်။ “ဘာရောဂါမှ မရှိဘူး၊ Aားနည်းတာပဲ၊ ကြက်Uများများစား” ဟု ဆိုလျက် နှင်လိုက်၍ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်Aတွက် လက်ဆောင်ကလေးများနှင့် သူ့Aိမ်သွားပြောသောAခါ ဆေးရုံတက်လိုက ပြန်တက်ဖို့ လက်မှတ်ကလေးနှင့် ခွင့်တစ်လထောက်ခံစာပါ ရေးပေးလိုက်သည်။ ထိုAချိန်မှစ၍ တိုင်းပြည်က လခရိက္ခာ လုံလောက်ေAာင် ပေးထားပါလျက် လောဘတက်ကာ လူမမာများထံမှ တံစိုးလက်ဆောင်စားသော သူ့လိုလူမျိုး၏ Aကျင့်စာရိတ္တကို ရွံရှာခဲ့သည်။ ကံAားလျော်စွာ ကျွန်တော်၏သမီး ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရပြီးလျှင် ဆရာဝန်ဖြစ်လာသည်။ သူနှင့်တစ်နှစ်တည်း ဆရာဝန် ဖြစ်လာသူတစ်ယောက်နှင့် လက်ထပ်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံး လက်ထောက်ဆရာဝန်များAဖြစ် နယ်ဆေးရုံတစ်ရုံသို့ သွားကြရသည်။ သွားခါနီးတွင် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးAား “ဆရာဝန်ဆိုတာ ဆေးကုဖို့၊ လူAများAကျိုး ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ဒါပဲ Aာရုံပြု၊ စီးပွားUစ္စာဆိုတာ သူ့ဘာသာသူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊ ဖြစ်ချင်မှလဲ ဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်ချင်နေ၊ ကိုယ်ကတော့ Aာရုံမပြုနဲ့၊ မဖြစ်လို့လဲ ဝမ်းမနည်းနဲ့၊ AရေးAကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာ လူAများ AားကိုးAားထား ပြုစရာဖြစ်ေAာင်လုပ်၊ လူAများ ချမ်းသာေAာင် ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ Aစွမ်းကုန် ကူညီပါ” ဟု မှာလိုက်ရပါသည်။ သူတို့ကလည်း နားထောင်ကြပါသည်။ ခေတ်လူများကလည်း ဤသဘောတွေကို သိမြင်ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဆုံးမစကားများမှာ ရှေးAဘိုးကြီး၏ စကားပမာ ကောင်းကားကောင်းပါ၏။ Aထပ်ထပ် ကြားရလွန်း၍ နားAီနေသည့် ဆုံးမစကားမျိုး ဖြစ်နေပြီလော မသိတတ်။ သူတို့က မသွားမီ “ကျွန်တော်တို့ ဂျီပီမလုပ်ဘူး (ဆေးကု မစားဘူး) ဆေးရုံကပဲနေကုမယ်၊ ပြီးတော့
7. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy88226ပညာဆက်ရှာမယ်၊ Aခု ကျွန်တော်တို့ တတ်ထားတာဟာ ဘာမှမဖြစ်လောက်ဘူး” ဟုကား ပြောသွားကြသည်။ သို့သော် နယ်ရောက်သွားသောAခါ သူတို့က Aိမ်မှာ ဆေးမကုချင်ကြောင်း ပြော၍မရ၊ ဆေးရုံကြောက်သူများ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများက တောင်းဆိုလာကြသောAခါ Aိမ်မှာ ဆေးခန်းဖွင့်ပေးရသည်ဟု ဆိုကြသည်။ သူတို့ဆီ ကျွန်တော်တို့ Aလည်ရောက်သွားသည်။ “ဆေးခန်းဖွင့်တာတော့ ဖွင့်ပေါ့ကွာ၊ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လူတွေကို ဆေးကုတဲ့Aခါ ငွေကြေးကို ပဓာနမထားကြနဲ့၊ Aထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကို ကူညီပါ” ဟု ပြောရပါသည်။ ဤတွင်လည်း ကျွန်တော်၏ ဆုံးမစကားသည် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်က ဆုံးမစကား ဖြစ်နေပြန်သည်။ သူတို့က ရယ်ရယ်မောမောပင် “တစ်နေ့က Aဘွားကြီးတစ်ယောက် Aိမ်လာလို့ ဆေးထိုးပေးလိုက်တယ်၊ ဆေးဆိုင်သွားမေးတော့ Aဲဒီဆေးက ရှစ်ကျပ်တဲ့၊ သူ့မှာက လေးကျပ်ပဲရှိတယ်၊ ဒီထက်ဈေးပေါတဲ့ဆေး ပြင်ရေးပေးပါတဲ့၊ ဘယ်ရှိမလဲ၊ ဒါနဲ့ သူ့မှာပါတဲ့ လေးကျပ်နဲ့ပဲ Aိမ်က ရှစ်ကျပ်တန်ဆေး ထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်၊ ဆေးထိုးခလဲ တစ်ပြားမှ မယူလိုက်တော့ဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ဟာက ‘ေAာက်ဆိုက်’ ပရိုက်တစ် မဟုတ်ဘူး၊ ‘Aပ်စိုက်’ ပရိုက်တစ်…” ဟု ပြောပြကြပါသည်။ ကျွန်တော် Aားရဝမ်းသာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သူတို့သည် ငယ်ရွယ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ မြင့်မားသော ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် သွေးဆောင်မှုက ရှိသည်။ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်လာကြသောAခါ သူတို့မှာ နယ်တွင်နေရစU်ကနှင့်မတူ မလွယ်ကူတော့၊ နေစရာAိမ် Aလွယ်တကူ မရ၊ သွားရလာရသည်ကလည်း မလွယ်၊ ကားဝယ်လောက်ေAာင်လည်း စုမိဆောင်းမိ မရှိ၊ မိဘများကလည်း ငွေကြေးမတောင့်တင်းကြ၊ Aတော် ကသီကရီ ကြုံရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နယ်တွင်နေစU်က ကုန်စရာ သိပ်မရှိလှ၍ Aသင့်Aတင့် စုမိခဲ့သော ရွှေတိုငွေစကလေးများကို ချရောင်းစားနေကြရသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူတို့မှာ ပျော်ပျော်ပဲ ဖြစ်သည်။ နယ်တွင်နေစU်က လူချစ်လူခင်များခဲ့၍ ရန်ကုန်တွင်ကား Eည့်သည်ကလည်း ‘ထောင်း’ သည်။ သူတို့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ကြပြီး၍ များမကြာမီပင် ရှိစုမဲ့စုကုန်သည်ဟု သိရသည်။ ဤတွင် သူတို့လည်း မတတ်သာလှသည့်Aဆုံး မူလကချမှတ်သည့် ‘ဂျီပီမလုပ်ဘူး’ ဆိုသည့် Aဓိဋ္ဌာန်ကို မလွှဲသာမရှောင်သာ ဖျက်ကာ AခြေAနေAရ ဆေးခန်းဖွင့်ကြရပြန်တော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမပြောသာ၊ ဆင်းရဲသူများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့သာ မှာရပါသည်။ သူတို့မှာ စားရေးသောက်ရေး ချောင်ချောင်လည်လည် ဖြစ်လာသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့နှင့်Aတူ Aခြားဆေးခန်း ဖွင့်သူများမှာ သူနာလာလျှင်လာသလို ကြီးပွားချမ်းသာ လာကြသည်ကို တွေ့မြင်ရသော်လည်း သူတို့မှာကား Aိပ်စိုက်တွေ Aတော်များသလော မသိ၊ Aခြားဆေးခန်းများထက် သိသိသာသာ သူနာAဝင်များပါလျက် သူတို့မှာ ဘယ်Aခါမှ ငွေကြေး ချောင်လည်သည်ဟူ၍ မရှိ၊ သွားရေးလာရေး ခက်ခဲလွန်း၍ ကာစုတ်ကလေးတစ်စီး ဝယ်ထားသည်ကိုပင် AလျU်မီေAာင် မပြုပြင်နိုင်၊ ဘက်ထရီဝယ်ချိန်၊ တာယာဝယ်ချိန် ဆိုလျှင် သူတို့မှာ ချေးရငှားရပြီ။ ကမာရွတ်က သူတို့ ဘကြီး ဒေါ်ကြီးများက သူတို့Aတွက် ခဏခဏ ငွေချေးပေးနေရ၍ “ဘယ်လို ဆရာဝန်တွေလဲ မသိပါဘူးဟယ်၊ သူများတကာ ဆရာဝန်တွေဆို တိုက်နဲ့ ကားသစ်နဲ့” ဟု ပြောသည်ကို ကြားခဲ့ရသည်။
8. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy88227“မကောင်းတဲ့ AခြေAနေကို သည်းခံကြကွာ၊ ဒါကို သည်းမခံနိုင်လို့ မဟုတ်တာ တစ်ခုခု ထလုပ်ရင် မင်းတို့ရည်မှန်းချက် လမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်၊ ဆင်းရဲပေစေ၊ ဒေါသမဖြစ်နဲ့၊ မင်းတို့ Aလုပ်က ဆေးကုဖို့” ကျွန်တော်လည်း ထိုထက်ပို၍ မပြောတတ်တော့။ Aာရုံတွေများသော ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွင် ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေလျက် သည်းခံနိုင်ဖို့ဆိုလျှင် Eရာမသတ္တိ လိုပေသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ လူနေမှုစနစ် တိုက်သစ်၊ ကားသစ်၊ AကြွားAဝါ၊ နိုင်ငံခြားပြန် AတုAပ၊ Aပြိုင်Aဆိုင်များ Aကြားတွင် Aနေဆင်းရဲလာသောAခါ သူတို့၏ စိတ်ကောင်း သဘောကောင်းကလေးများနှင့် မြင့်မားသော ရည်မှန်းချက်များ ပျောက်ဆုံးသွားကြမည်ကို များစွာစိုးရိမ်မိသည်။ ဆင်းရဲသော AခြေAနေကို သည်းမခံနိုင်ကြ၍ သို့မဟုတ် ဒေါသဖြစ်ကြ၍ တစ်ခုခု ထလုပ်ကြလျှင် ဆရာဝန်ပညာ တတ်ထားသူတို့မှာ Aခြားလူများထက် ခရီးရောက်သည်။ လမ်းမှားဖြင့် ခရီးရောက်သည်ကို AလိုမရှိAပ်။ “ဆေးခန်းဖွင့်လို့ လူနာမလာရင် ဆေးထုတ်ပြီး ရောင်းစားတာနဲ့ပဲ တစ်ထောင်ကိုးရာတော့ Aသာကလေး” ဟု ပြောသံများ နေရာတကာတွင် ကြားနေရသည်။ ကြာသော် ဤAလုပ်မျိုးကိုပင် တရားဝင် ပုံမှန်ထင်လာကြတော့မည်။ ‘ဒါ လူတိုင်းလုပ်နေကြတဲ့Aလုပ်’ ဟူသော Aကြောင်းပြချက်ဖြင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်လာကြတော့မည်။ လူတိုင်းလုပ်နေကြသော Aလုပ်ဆိုရုံမျှဖြင့် မကောင်းသောAလုပ်ကမကောင်းသောAလုပ်ကမကောင်းသောAလုပ်ကမကောင်းသောAလုပ်က ကောင်းသောAလုပ်ကောင်းသောAလုပ်ကောင်းသောAလုပ်ကောင်းသောAလုပ် ဖြစ်မလာနိုင်၊ မကောင်းမှုကို မကောင်းမှုမှန်းသိလျက် AာရတီAာရတီAာရတီAာရတီ ဝိရတီဝိရတီဝိရတီဝိရတီ မင်္ဂလာတရားAတိုင်း ဝေးစွာလည်းရှောင်မှ၊ Aထူးသဖြင့်လည်း ရှောင်ပါမှ။ ။ ဤAကြောင်းများကို စU်းစားတွေးတော နေစU်မှာပင် ကျွန်တော်ေAဂျေကရိုနင် ရေးသော “ယုဒသစ်ပင်” Aမည်ရှိ ဝတ္ထုကို ဖတ်လိုက်မိသည်။ ထိုဝတ္ထုတွင် ငယ်စU်က မိဘသေဆုံးခဲ့၍ ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ပညာသင်ခဲ့ရသော စိတ်ကောင်း သဘောကောင်းနှင့် ဆရာဝန် လူတော်ကလေး တစ်ယောက်၊ ရည်မှန်းချက် ကောင်းကောင်းဖြင့် ရိုးရိုးသားသား Aလုပ်လုပ်ရန် AစီAစU် ရှိခဲ့ပါသော်လည်း စည်းစိမ်ချမ်းသာ Uစ္စာကြေးငွေနှင့်တကွ လောကီAာရုံ ကာမဂုဏ်တို့၏ ဖြားယောင်းခြင်းကို ခံရသောAခါ သစ္စတရားပျက်ယွင်းလျက် ကြေကွဲဖွယ် Aပျက်Aစီးဖြင့် Aဆုံးသတ်သွားရသည့် Aကြောင်းကို ကရိုနင်က သူ့ကလောင်စွမ်းဖြင့် လက်ကချမရေAာင် စွဲမက်စရာ ခြယ်မှုန်းထားသည်။ ကျွန်တော်သည် ဤဝတ္ထုကို လူ့သဘော လူ့စရိုက် ဖွဲ့ဆိုပုံ၊ တင်ပြပုံမှAစ သဘောကျလွန်း၍ နှစ်ခေါက်သုံးခေါက် ပြန်ဖတ်ကာ သမီးတို့ကိုလည်း ဖတ်စေပါသည်။ ငွေကြေး ရှာဖွေ Aားကောင်းသော ဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြ၍ သူတို့က ပို၍နားလည်ကြပါလိမ့်မည်။ ထိုဝတ္ထုAတွက် Aမှာစာရေးသူက- ဒေးဗစ်မိုရေး၏ ဘဝသည် Aခြားကြီး ခြားခဲ့လေပြီ။ ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားAဖြစ် ကလိုက်ဒဆိုက် ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်၌ ဆေးစာAုပ်ကြီးများနှင့် နပန်းလုံးခဲ့ရသော သူ့ဘဝသည် Aတော်Aတန် ပျိုရွယ်စU်မှာပင် သူAနားယူပြီးနောက် နေသော ဆွစ်ဇာလန်ပြည် Aဲ့လပတောင်တန်းပေါ်မှ ပန်းချီကားများ၊ ပြင်သစ် ရှေးဟောင်းပရိဘောဂ AလှAပများဖြင့် တခမ်းတနား တန်ဆာဆင်သည့် Aိမ်ကြီးပေါ်က စည်းစိမ်ကျကျ သူ့ဘဝနှင့်ဆိုလျှင် Aလွန်ပင်
9. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 8 Aလှမ်းကွာလေသည်။ မိန်းမများစွာက သူ့Aားချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် စိတ်ေAးချမ်းသာ နေနိုင်ဖို့ရာ သူ့ဘဝတွင် တစ်စုံတစ်ခုသော Aရာသည် လစ်ဟင်းလျက် ရှိခဲ့လေသည်။ သူသည် ဆင်းရဲမွဲတေသော Aထီးကျန် လူပျိုလူရွယ်ဘဝမှနေ၍ ထိပ်ဆုံးသို့ Aမြန်ဆုံးနည်းဖြင့် တက်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သူ့Aား Aတိတ်ဆီမှ Aသံတစ်သံက “သင့်ကိုယ်ပိုင် Aစွမ်းAစများကို သင်Aဘယ်သို့ Aသုံးပြုခဲ့သနည်း၊ ဤAစွမ်းAစများကို လူ့ဘောင် AကျိုးAတွက် Aသုံးမပြုသည့်Aတွက် သင့်ထံမှ တန်ရာတန်ကြေးကို ခန့်ခွဲတောင်းဆိုရမည်၊ ပြုပြင်ရန် နောက်ကျပြီဟူ၍ ရှိသလော” ဟု မေးလျက်ရှိသည်။ ဒေါက်တာ ကရိုနင်သည် သူ၏AသိAမြင်နှင့် ပင်ကိုထိုးထွင်းဉာဏ်၊ စာရေးကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို Aသုံးပြုကာ လူတစ်ယောက်၏ သဘောသဘာဝ စရိုက် တစ်စတစ်စ ရင့်ကျက် ဖွဲ့တည်လာပုံကို လည်းကောင်း၊ Aမှတ်မထင် ဆုံးဖြတ်မှုကလေးများ၊ AသေးAဖွဲ ကိစ္စကလေးများ၌ မိမိကိုယ်မိမိ လှည့်စားမှု Aလေ့Aကျင့် ကလေးများက သူ့Aား မလွှဲသာ မရှောင်သာ တွေ့ရမည့် ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ေAာင် တင်ပေးလိုက်ပုံကိုလည်းကောင်း ဖတ်မိလျှင် လက်မှချ၍ မရနိုင်ေAာင် ဆွဲငင်စွမ်းသော ဝတ္ထုရှည်တစ်ပုဒ် ရေးဖွဲ့ထားသည်… ဟု ဖော်ပြထားလေသည်။ ဤဝတ္ထုမျိုးကို ဖတ်ရှုကြရလျှင် ရည်ရွယ်ချက် မြင့်မား၍ လူAများAတွက် Aကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၌ဤဝတ္ထုမျိုးကို ဖတ်ရှုကြရလျှင် ရည်ရွယ်ချက် မြင့်မား၍ လူAများAတွက် Aကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၌ဤဝတ္ထုမျိုးကို ဖတ်ရှုကြရလျှင် ရည်ရွယ်ချက် မြင့်မား၍ လူAများAတွက် Aကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၌ဤဝတ္ထုမျိုးကို ဖတ်ရှုကြရလျှင် ရည်ရွယ်ချက် မြင့်မား၍ လူAများAတွက် Aကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိကြသူ ကျောင်းဆရာ၊ Aင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန် စသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိကြသူ ကျောင်းဆရာ၊ Aင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန် စသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိကြသူ ကျောင်းဆရာ၊ Aင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန် စသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိကြသူ ကျောင်းဆရာ၊ Aင်ဂျင်နီယာ၊ ဆရာဝန် စသော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း လူငယ်လူရွယ်တို့သည် လောကီAာရုံ ကာမလူငယ်လူရွယ်တို့သည် လောကီAာရုံ ကာမလူငယ်လူရွယ်တို့သည် လောကီAာရုံ ကာမလူငယ်လူရွယ်တို့သည် လောကီAာရုံ ကာမဂုဏ်တို့၏ သွေးဆောင်ခြင်းကို တင်းတင်းမာမာဂုဏ်တို့၏ သွေးဆောင်ခြင်းကို တင်းတင်းမာမာဂုဏ်တို့၏ သွေးဆောင်ခြင်းကို တင်းတင်းမာမာဂုဏ်တို့၏ သွေးဆောင်ခြင်းကို တင်းတင်းမာမာ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖယ်ရှားလျက် လမ်းမှားကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိသဖြင့်ပြတ်ပြတ်သားသား ဖယ်ရှားလျက် လမ်းမှားကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိသဖြင့်ပြတ်ပြတ်သားသား ဖယ်ရှားလျက် လမ်းမှားကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိသဖြင့်ပြတ်ပြတ်သားသား ဖယ်ရှားလျက် လမ်းမှားကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိသဖြင့် ဤစာဤစာဤစာဤစာAုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုလိုက်ပါသည်။Aုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုလိုက်ပါသည်။Aုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုလိုက်ပါသည်။Aုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုလိုက်ပါသည်။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။ ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။ ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။ ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။ ။ ထင်လင်းထင်လင်းထင်လင်းထင်လင်း ၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇ ဇန်နဝါရီဇန်နဝါရီဇန်နဝါရီဇန်နဝါရီ ၂၅၂၅၂၅၂၅ ရက်။ရက်။ရက်။ရက်။
10. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy88229JUDASJUDASJUDASJUDAS TREE (Bot. Cercis Siliquastrum)aEurasian, purple flowered, leguminous tree,TREE (Bot. Cercis Siliquastrum)aEurasian, purple flowered, leguminous tree,TREE (Bot. Cercis Siliquastrum)aEurasian, purple flowered, leguminous tree,TREE (Bot. Cercis Siliquastrum)aEurasian, purple flowered, leguminous tree, supposed to be the kind upon which Judas hanged himself.supposed to be the kind upon which Judas hanged himself.supposed to be the kind upon which Judas hanged himself.supposed to be the kind upon which Judas hanged himself. ခရစ်တော်၏Aပေါ်ခရစ်တော်၏Aပေါ်ခရစ်တော်၏Aပေါ်ခရစ်တော်၏Aပေါ် သစ္စာဖောက်၍သစ္စာဖောက်၍သစ္စာဖောက်၍သစ္စာဖောက်၍ ခရစ်တော်Aားခရစ်တော်Aားခရစ်တော်Aားခရစ်တော်Aား သူသတ်တို့၏သူသတ်တို့၏သူသတ်တို့၏သူသတ်တို့၏ လက်သို့လက်သို့လက်သို့လက်သို့ ပေးAပ်ခဲ့သူ၊ပေးAပ်ခဲ့သူ၊ပေးAပ်ခဲ့သူ၊ပေးAပ်ခဲ့သူ၊ ခရစ်တော်၏ခရစ်တော်၏ခရစ်တော်၏ခရစ်တော်၏ တပည့်လူယုံတပည့်လူယုံတပည့်လူယုံတပည့်လူယုံ ‘‘‘‘ယုဒယုဒယုဒယုဒ’’’’ သည်သည်သည်သည် နောင်တကြီးစွာရလျက်နောင်တကြီးစွာရလျက်နောင်တကြီးစွာရလျက်နောင်တကြီးစွာရလျက် ဤသစ်ပင်ထက်၌ဤသစ်ပင်ထက်၌ဤသစ်ပင်ထက်၌ဤသစ်ပင်ထက်၌ ကြိုးဆွဲချ၍ကြိုးဆွဲချ၍ကြိုးဆွဲချ၍ကြိုးဆွဲချ၍ သေသည်ဟုသေသည်ဟုသေသည်ဟုသေသည်ဟု ခရစ်ဝင်၌ခရစ်ဝင်၌ခရစ်ဝင်၌ခရစ်ဝင်၌ လာသည်။လာသည်။လာသည်။လာသည်။ ဤသည်ကိုဤသည်ကိုဤသည်ကိုဤသည်ကို Aစွဲပြု၍Aစွဲပြု၍Aစွဲပြု၍Aစွဲပြု၍ ဤသစ်ပင်မျိုးကိုဤသစ်ပင်မျိုးကိုဤသစ်ပင်မျိုးကိုဤသစ်ပင်မျိုးကို ‘‘‘‘ဝိညာU်ဝိညာU်ဝိညာU်ဝိညာU် ပျောက်ဆုံးသူတို့၏ပျောက်ဆုံးသူတို့၏ပျောက်ဆုံးသူတို့၏ပျောက်ဆုံးသူတို့၏ သစ်ပင်သစ်ပင်သစ်ပင်သစ်ပင်’’’’ သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ် ‘‘‘‘ယုဒသစ်ပင်ယုဒသစ်ပင်ယုဒသစ်ပင်ယုဒသစ်ပင်’’’’ ဟုဟုဟုဟု ခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။ခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။ခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။ခေါ်စမှတ်ပြုကြသည်။
11. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 10 ၁၁၁၁ ဆောင်းကြိုရာသီ နံနက်ခင်းသည် နေသာလှသဖြင့် မိုရေးသည် သူ၏ပြတင်းAပြင်ဘက်ရှိ ပြဒါးတိုင်ကိုကြည့်ကာ သူ၏ Aိပ်ခန်းနှင့် ဆက်လျက်ရှိသော လေသာဆောင်၌ နံနက်စာစားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။ ညU့်က သူနှစ်ခြိုက်စွာ Aိပ်ပျော်ခဲ့သည်။ Aိပ်မပျော်သည့်ရောဂါ စွဲကပ်ဖူးသူAဖို့ ခြောက်နာရီမျှ Aိပ်ပျော်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် Aားတက်စရာပင်ဖြစ်၏။ သူ၏ ပိုးသား ညU့်ဝတ်Aင်္ကျီရှည်ကို ဖောက်ထွင်း ဝင်လျက်ရှိသော နေရာင်ခြည်ကြောင့် သူသည် နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိနေ၏။ တပည့်ကျော် Aာထူရိုကလည်း သူ၏နံနက်စာကို လိုလေးသေး မရှိေAာင် ပြင်ထားသည်။ သူသည် ငွေဓာတ်ဗူး၌ ထည့်ထားသော ကော်ဖီပူပူကို ငှဲ့ထည့်လိုက်ပြီးလျှင် မုန့်Aခွေကလေးတစ်ခုကို တောင်ပေါ် ပျားရည်ဖြင့် သုတ်လိုက်ယင်းမှ နယ်သစ် မြေသစ်ရှာဖွေသူသည် နယ်သစ် မြေသစ်ကို တွေ့လိုက်ရာ၌ ကျေနပ်မှု Aပြည့်ဖြင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လှည့်ပတ်ကာ ရှုစားလိုက်သကဲ့သို့ သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်စိ ကစားလိုက်သည်။ တယ်လှပါလား၊ တစ်ဘက်မှာ Aမိုးနီ တောင်ပေါ်Aိမ်ကလေးတွေ ဟိုနားတစ်လုံး သည်နားတစ်လုံး ပြန့်ကျဲနေကြတဲ့ မြက်ခင်းပြင် စိမ်းတွေ။ Aထက်မိုးပြာထဲ ထိုးဝင်နေတဲ့ ရိုက်ဇင်ဘတ် တောင်ထွတ်။ ကျန်တစ်ဘက်မှာတော့ Aက်ရှင်ဗရုခ် ချိုင့်ဝှမ်းရဲ့ ပြေပြေလျောလျော ကုန်းစောင်းတွေပေါ်က သစ်သော့၊ မက်မန်း၊ ချယ်ရီခြံတွေ။ တောင်ဘက်ကို ကြည့်လိုက်ယင် ဟိုဝေးဝေးမှာ နှင်းဆောင်းတောင်ထွတ်တွေနဲ့ Aဲ့လပတောင်တန်း။ နောက် သူ့ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ တောင်ကလပ်ကလေးရဲ့ေAာက်ဘက်မှာ ရာသီUတု AခြေAနေAလိုက် ခုပင် လှိုင်းလေထန်ချင် ထန်လိုက်၊ တော်ကြာ ပြန့်ပြူးငြိမ်သက်နေလိုက်နဲ့ Aသွင်Aမျိုးမျိုး ပြောင်းတတ်တဲ့ ချစ်စရာ့ ရွှေဆီးရေAိုင်။ ယခုမူ ဇာချည်ပါးပါး လွှမ်းထားသကဲ့သို့သော နှင်းမြူလွှာကို ဖြတ်လျက် ရွက်ဖွေးဖွေးနှင့် လှေကလေးတစ်စင်းသည် ကဗျာဆန်ဆန်ပြောရလျှင် ငွေငန်းဖြူကလေး တစ်ကောင်ပမာ တရွေ့ရွေ့ ငြိမ်သက်စွာ တိုးသွားနေသည်။ နှစ်ရှည်လများ ရှာဖွေခဲ့ရာမှ ခေတ်မီသူတို့၏ AသုံးAဆောင် Aားလုံးရနိုင်ရာ မဲလစဗတ်မြို့နှင့် နီးနီးနားနား ဤမျှ ငြိ်မ်းချမ်းသာယာ၍ လှပသော နေရာကလေးမျိုးကို တွေ့ခဲ့ရခြင်းမှာလည်း ကံကောင်းလှပေစွ။ ဆွစ်ဇာလန်ပြည်သား နာမည်ကျော် ဗိသုကာဆရာတစ်ယောက် နေရန် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် ဤAိမ်မှာလည်း ဘာမှ လိုလေသေးမရှိေAာင် သူ့Aဖို့ ပြည့်စုံလှသည်။ တောင့်တင်းခိုင်မာသည်။ Aတွင်း၌လည်း စည်းစိမ်ကျကျ နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိနေေAာင် စီမံထားသည်။ သူ၏ ပန်းချီကားများ ချိတ်ဆွဲပြသထားရန် Aတွက်လည်း ကျယ်ဝန်းသော Eည့်ခန်းရှည်ရှိသည်။ Aမေရိကန်ပြည်တွင် ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူတစ်Uီး Aလိုကျ Aုတ်ကြွပ်ကြမ်းခင်း မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်းကAစ ခေတ်မီေAာင် စီမံထားသည်။ သူသည် ကျရောက်လာလတ္တံ့သော ကြမ္မာဆိုးကြီးကို မသိမမြင်နိုင်ရကား သူ့ဘဝသူ Aကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်လျက် သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ကို မှုတ်ထုတ်လိုက်လေ၏။ သူ့Aဖို့ ဤတစ်နေ့တာAတွက် မည်သို့ Aချိန်ဖြုန်းပစ်ရပါAံ့နည်း။ Aဝတ်Aစားလဲယင်းက နည်းလမ်း Aမျိုးမျိုးကို သူ သုံးသပ်ကြည့်နေမိ၏။ မဒမ်ေAာ်လတီရှိုဖာကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ချိန်းပြီး Aမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ခွေးတစ်Aုပ်နဲ့ တူဖိန်သော်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်ရ ကောင်းမလား။ ဒါလဲ မဖြစ်သေးဘူး။ ဒီAမျိုးသမီးကို သူက ညနေ ၅ နာရီမှာ ဂီတပွဲတော် Eည့်ခံပွဲ ခေါ်သွားရUီးမယ်။ Aင်း… Aတင်းခေါ်လို့တော့ ကောင်းမယ်မထင်ဘူး။ ကိုယ့်လှေ ကိုယ်ထုတ်ပြီးတော့ Aိုင်ထဲမှာ
12. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 11 ငါးပတ်ဖမ်း ထွက်နေကြတဲ့ တံငါတွေနဲ့ လိုက်သွားရကောင်းမလား။ နောက်ဆုံးတွင် သူသည် နှင်းနှောင်းပက်သဖြင့် ပျက်စီးမတတ်ဖြစ်နေသော သူ့နှင်းဆီခင်းကို Aလျင်သွားကြည့်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။ သူသည်ေAာက်ထပ်သို့ ဆင်း၍ Aမိုးမိုးထားသော ဝရန်တာရှိရာသို့ လျှောက်လာခဲ့၏။ ဆိုဖာရှည်ကြီး၏ ဘေးတွင် စီ၍တင်ထားသော စာများကို တွေ့ရသည်။ သူ၏ စာများတွင် သူ့Aား စိတ်Aနှောင့်Aယှက် ဖြစ်စေမည့် Aကြောင်းAရာ တစ်စုံတစ်ရာ မပါသော်လည်း သူသည် စာများကိုဖွင့်ရာတွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆုတ်ဆိုင်းဆိုင်း ဖြစ်နေ၏။ သူ့မှာ Aဓိပ္ပာယ်မရှိ ကြောက်လန့်သည့်စိတ်က ကပ်နေသည်မှာ ဆန်းလှ၏။ မီးဖိုထဲတွင် သူ့ဘဏ္ဍာစိုး Aာထူရိုသည် သီချင်းဆို၍ နေလေသည်။ မိုရေးက ပြုံးမိ၏။ သူ၏ ဘဏ္ဍာစိုးကြီးမှာ ဇာတ်သဘင် ဝါသနာကြီးသူ ဖြစ်သော်လည်း ခိုင်းရစေရ ကောင်းပါသည်။ သစ္စာရှိသည်။ သူ့မိန်းမ Aယ်လီနာမှာ စိတ်ကောက်တတ်သော်လည်း Aချက်Aပြုတ်မှာကား Aံ့စရာ ကောင်းလောက်ေAာင် တော်သူဖြစ်သည်။ မိုရေးမှာ ဤသို့သော တပည့်တပန်းမျိုး ရသည့်တိုင်ပင် ကံကောင်းသည် ဆိုရမည်။ ‘ကံကောင်းတာ သက်သက်ပဲလား’ ဟု သူ့ဘာသာတွေးယင်း ဝင့်ကြွားစွာပင် သူသည် မြက်ခင်းဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ သည်မြက်ခင်းကို တိုတိုကလေး ကတ္တီပါမွေးထည့်ခင်းထားသကဲ့သို့ ဖြတ်ထားသည်။ Aမေရိကန်နိုင်ငံ ကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ်တွင် နေခဲ့စU်ကဆိုလျှင် ကျောက်စရစ်မြေ ဖြစ်ရသည့်Aထဲတွင် ပေါက်မြက်ရိုင်းတွေက မနိုင်နိုင်ေAာင် ပေါက်သဖြင့် မြက်ခင်းဟူ၍ မည်မည်ရရမရှိခဲ့။ မြက်ခင်းဘေးတွင်ကား လမ်းလျှောက် ပန်းပင် လန်းလန်းလှလှကလေးများ Aနားသတ်ထားသည့် သမံတလင်းလမ်း၊ သည်လမ်းAတိုင်း လျှောက်သွားလျှင် ရေကန်၊ ရေကန်ထဲက ကြာဖက်ကြီးများေAာက်တွင် ရွှေရောင်ငါးကြင်းများ ငြိမ်သက်စွာ ခိုနားနေကြသည်။ ထိုမှလွန်သော် ကျောက်ဆောင်မြင့် Aထက်တွင် ပန်းလိမ္မော်ပင်ကလေးများ၊ သကြားပင် ပုကလေးများAပြင် AခြားAပင်ကလေးများစွာဖြင့် လှပစွာ တန်ဆာဆင်ထားသော ဂျပန်UယျာU် ရှိသည်။ ၎င်းနောက်တွင် ခွံမာသီးများAပါAဝင် Aသီးမှည့်များဖြင့် ပြွတ်နေသော သစ်သီးပင် ဆယ့်ခုနစ်မျိုး စိုက်ထားသည့် သစ်သီးခြံ။ စင်စစ် သူတကယ်Aမြတ်တနိုး စိုက်ထားသည့် Aပင်မှာကား နောက်ခံရှုခင်းဖြစ်သော ရေAိုင်၊ တောင်နှင့် တိမ်တိုက်များ၏ Aထက်သို့ပင် ထိုးတက်လျက်ရှိသော ‘ယုဒပင်’ ဟု ခရစ်ဝင်၌လာသော စိန်ပန်းနီလာပင်ကြီးတည်း။ ထိုAပင်ကြီးသည် နွေကြိုရာသီ၌ဆိုလျှင် ခရမ်းရောင်နုနု Aပွင့်များဖြင့် လှပစွာဝေနေတတ်သည်။ သူ့Eည့်သည်များ Aားလုံးက ထိုAပင်ကြီးကိုကြည့်၍ ချီးမွမ်းစကား ဆိုတတ်ကြသည်။ UယျာU်Eည့်ခံပွဲများ လုပ်သောAခါမျိုးတွင် Aင်ဆိုင်ကလိုပီးဒီးယား ဗြိတိန်နိကား စွယ်စုံကျမ်းထဲမှ ဖတ်ထားကြောင်း ထိမ်ဝှက်လျက် ဤသစ်ပင်ကြီး၏Aကြောင်း သူဗဟုသုတကြွယ်ဝပုံ AမျိုးသမီးEည့်သည်များAား ထုတ်ကြွားရသည်ကို သူနှလုံးတွေ့သည်။
13. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 12 “ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီAပင်ရဲ့ ရုက္ခဗေဒ Aမည်ကတော့ ‘ဆာဆီဆီလီကွာစထြမ်’ လို့ ခေါ်ပါတယ်၊ Aရှေ့တိုင်းမှာတော့ကာ Aရွက်ကို သုပ်စားကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်၊ Aင်း… ဒါကတော့ Aဓိပ္ပာယ်တော့ သိပ်မရှိပါဘူး၊ လူAများ သိကြတဲ့ ရှေးAယူAဆAတိုင်းပေါ့ဗျာ၊ ကျွန်တော့်တပည့်ကျော် Aီတာလျံ Aာထူရိုကတော့ Aင်မတန် Aယူသည်းတာကလား၊ ဒီသစ်ပင်ကို ‘ဝိညာU်ပျောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ သစ်ပင်’ လို့ ဆိုသဗျ” လောလောဆယ်တွင် သူသည် သခွားခင်းနားတွင် သူ၏ UယျာU်မှူးAိုကြီး ဝီလဟမ်ကို တွေ့လိုက်ရ၏။ ဝီလဟမ်သည် Aလုပ်ကျွမ်းကျင်ပေသည်။ သို့သော် သူသည် မြင်းတပ်မှ တပ်ကြပ်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ ခေါင်းမာသည်။ သူသည် ခါးစည်းရှေ့ဖုံး Aဝတ်စိမ်းကို ဆွဲဖြန့်ယင်း Uီးထုပ်ကိုချွတ်ကာ မိုရေးကို ဝတ်ကျေတမ်းကျေ နှုတ်ဆက်သည်။ မိုရေးက ပါးနပ်ယU်ကျေးစွာပင် “ကျွန်တော်တို့ နှင်းဆီပင်တွေကို သွားကြည့်ကြUီးစို့လား” ဟု ပြောလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူတို့နှစ်ယောက်သား နှင်းဆီခြံဘက်သို့ လာခဲ့ကြ၏။ AဘိုးAိုသည် ဤနေရာတွင် ကြည့်လိုက်တိုင်း နှင်းဆီပင်ပျက်များကို တွေ့ရ၍ မကျေမချမ်း ဆဲဆိုရေရွတ်ခဲ့ရသည်။ Aပင်သစ်များ မည်ရွေ့မည်မျှ ပြန်စိုက်ရမည်ကို ယခုသူတို့ ရေတွက်ကြသည်။ ဝီလဟမ်ကြီး ထွက်သွားလျှင် ဆိပ်ကမ်းAုပ်ကြီး၏ ကလေးငယ်နှစ်ယောက်သည် မတ်စောက်သော ကုန်းတက်လမ်းAတိုင်း တက်လာကြသည်။ သူတို့၏ လက်ထဲတွင် မိုရေးAတွက် ပစ္စည်းပို့သော Aကြောင်းကြားစာတစ်စောင် လက်မှတ်ထိုးယူရန် စာAုပ်နှင့်Aတူပါလာ၍ ထုံးစံAတိုင်းပင် ကလေးနှစ်ယောက်စလုံး Aမောတကောဖြစ်ေAာင် ပျော်ရွှင်လာကြသည်။ ဆူဇီက စာAိတ်ဝါကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ထား၍ ဟန်းက လက်မှတ်ထိုးရန် စာAုပ်ကို ကိုင်ဆောင်လာသည်။ ကလေးများမှာ တောက်ပသော မျက်လုံးများဖြင့် ချစ်စရာ ကောင်းကြပေသည်။ မိုရေး၏Aကျင့်ကို သိထားကြသဖြင့် သူတို့ရနေကျ ဆုလာဘ်များကို မျှော်လင့်ကာ သူတို့၏ မျက်နှာကလေးများမှာ ဝင်းလက်၍ နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မိုရေးသည် ဝိုင်Aရက်သေတ္တာ နှစ်လုံးပို့လိုက်သည်ကို Aကြောင်းကြားသည့်စာကို သေချာေAာင် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးလျှင် မျက်နှာထားတင်းတင်းဖြင့် ခေါင်းယမ်းပြလိုက်ယင်း… “မင်းတို့က တယ်လိမ္မာတဲ့ ကလေးတွေကိုးကွ၊ မင်းတို့ကိုတော့ ဒဏ်ပေးရလိမ့်မယ်” ဟု ဆိုလိုက်၏။ ထို့နောက် မိုရေးက သူတို့Aား သူ့တို့Aလွန်နှစ်သက်သော ဆီးတော်ပင်ဆီသို့ ခေါ်သွားလေရာ ကလေးများလည်း ပျော်ရွှင်စွာ တခစ်ခစ်ရယ်မောယင်း လိုက်သွားကြလေသည်။ ဆီးတော်ပင်မှာ Aသီးမှည့်များဖြင့် ဝင်းနေ၏။ မိုရေးက Aကိုင်းတစ်ကိုင်းကို ဆွဲလှုပ်လိုက်ရာတွင် Aသီးများ တဖုတ်ဖုတ် မြေကြီးပေါ်သို့ ကြွေကျပြီးနောက် လိမ့်သွားသည့် ဆီးတော်သီးများကို လိုက်ကောက်ကြယင်း ကလေးများေAာ်ဟစ် ရယ်မြူးနေကြလေသည်။ သူတို့Aိတ်များ ပြည့်မှပင် ပြန်လွှတ်လိုက်၏။ ထို့နောက်တွင် သူသည် နာရီကို ကြည့်လိုက်သည်။ နှင်းဆီပင်ပေါက်များကို သွားဝယ်ဖို့ Aချိန်ကျပြီ။
14. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 13 သူသည် ကားဂိုဒေါင်ထဲမှ ဂျက်ဂွါAမျိုးAစား ပြိုင်ကားကို ရွေး၍ထုတ်ခဲ့၏။ Aသက် ငါးဆယ့်ငါးနှစ်Aရွယ်ေAးေAးလူလူ Aနားယူနေသော လူတစ်ယောက်Aဖို့ Aရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်ရသော ဤကားမျိုးသည် Aရွယ်နှင့် မလိုက်လှဟု ထင်စရာဖြစ်သည်။ သူ၏Iနြေ္ဒရသော Aခြားသောကားများ ဖြစ်ကြသည့် ဟမ်းဘားAမျိုးAစား စတေရှင်ဝက်ဂွန်နှင့် ဆစ်လဗားကလောက်ပုံစံ ရိုးလစရွိုက်တို့နှင့် စာသော် သူ၏ ပြိုင်ကားသည် သူနှင့် ပိုပြီး မသင့်တော်သယောင် ဖြစ်နေသည်။ သို့သော် သူသည် စိတ်ပျိုကိုယ်နု ဆိုသကဲ့သို့ Aရွယ်တင်သူ ဖြစ်၏။ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွယ်သွယ်လျလျ AချိုးAစားကျ၍ သူ၏A ပြုံးမှာ တဘက်သားကို ဆွဲဆောင်စွမ်းသော ထူးခြားနှစ်လိုဖွယ်ရှိသော သဘာဝA ပြုံး၊ လူငယ့်A ပြုံး။ A စတွင် ကားလမ်းသည် စားကျက်တောကိုဖြတ်၍ သွားသည်။ လည်ပင်းမှ ခလောက်ကြီးတွေ တဒေါင်ဒေါင်နှင့် နွားညိုမတို့သည် တAိAိတလှုပ်လှုပ် ရွေ့လျားမြက်စားနေကြသည်။ A နိမ့်ဘက်က လယ်ကွင်းများတွင် ယောက်ျား မိန်းမတို့သည် ကောက်ရိတ်လျက် ရှိကြသည်။ သူသည် ကလေးသူငယ်များကို ခင်မင်ကြင်နာတတ်သူ ဖြစ်သောကြောင့် ဤနေရာမှလူများက သူ့ကို ကောင်းစွာ သိကျွမ်းခင်မင်ကြသည်ဖြစ်ရာ A ချို့က သူတို့၏လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်း၍ မိုရေးAား လှမ်း၍ လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြ၏။ သူကလည်း ဤဒေသရှိ တံပိုးခရာများ ဆွဲဆွဲငင်ငင်မှုတ်၍ ကျင်းပလေ့ရှိသော တောမင်္ဂလာဆောင်များ၊ ရှေးရိုးမပျက် စီတန်းလှည့်လည်ပွဲများ၊ သူ၏မွေးနေ့တွင် လာရောက်၍ တီးခတ်ဖျော်ဖြေကြသည့် ကျေးရွာ တီးဝိုင်းA ဖွဲ့များ A စရှိသည့် တောရွာဓလေ့ ပွဲလမ်းသဘင်တို့တွင် သူ့ကိုယ်သူ လူချစ်လူခင်များေAာင် A ပင်ပန်းခံ၍ လုပ်ထားသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ဖြင့်ပင် သူသည် မြို့A စွန်သို့ ရောက်လာသည်။ လမ်းများသည် တိုက်ချွတ် ဆေးကြောထားသကဲ့သို့ ပြောင်စင်နေကြသည်။ တရုတ်ကတ်စိမ်းနှင့် Aိမ်ဖြူကလေးများ၏ ပြတင်းဝရှိ ပန်းစိုက်သေတ္တာကလေးများတွင် ကြွေပန်းပင်၊ ဖယောင်းပန်းပင်ကလေးများဖြင့် Aားလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် သပ်ရပ်၍ ကြည်လင်ရွှင်လန်းနေသော ဤA ရပ်တွင် ဘယ်A ခါမှ A ခြေမပျက်တော့မည့်ဟန်၊ ထိုA ရပ်ရှိ လူများသည်လည်း ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော စိတ်၊ ယU်ကျေးသိမ်မွေ့သော စိတ်ထားတို့ကို ထာဝရ လက်ကိုင်ထားကြမည့်ဟန် ထင်ရ၏။ မျက်မှောက်ခေတ်Aခါတွင် တလောကလုံး၊ ရူးသွပ်နေဘိသကဲ့သို့ Aနှစ်သာရ Aလျှင်းမရှိသော ရိုင်းစိုင်းသော လူတို့မှဝေးရာ ဤနေရာမျိုးသို့ လာရောက်Aခြေချမိသည်မှာ ကောင်းလေစွ၊ မှန်လေစွဟုလည်းေAာက်မေ့မိပြန်သည်။ Aမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှ သူ၏ စီးပွားဖက်ဖြစ်ခဲ့သူ ဟိုးလဘရုကမူ ဤAဆုံးAဖြတ်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့သေးသည်။ သို့ရာတွင် သူ့မှာ ဤနေရာမျိုးတွင် နေရသဖြင့် ဇာတ်မြုပ်နေရသည်ကား မဟုတ်။ ဂီတပညာရှင် Aကျော်Aမော် ဝဂ္ဂနာသည် ဤဒေသသို့လာ၍ ခနစ်နှစ်တိုင်တိုင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ကာ ကမ္ဘာကျော်ရစ်မည့် တေးသီချင်းများကို ရေးစပ်ခဲ့ဖူးသည် မဟုတ်လော။ ဝဂ္ဂနာသည် ရပ်ရွာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့Aတွက် တပ်ချီတေးတစ်ပုဒ်ကိုပင် ရေးစပ်ပေးခဲ့သေးသည် မဟုတ်လော။ ဤAတွေးကို တွေးမိရာတွင်ကား မိုရေးသည် ပြုံးလိုက်မိသေး၏။ ကဗျာဆရာကြီးများ ဖြစ်ကြသော ရှယ်လီနှင့် ဘိုင်ရွန်တို့လည်း ဤAနီးAနားဝန်းကျင်တွင် Aကြာကြီး လာနေသွားကြဖူးသေးသည် မဟုတ်လော။
15. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 14 ထိုမှတစ်ပါးလည်း ယခုပင် မဲလစဗတ်မြို့တွင် ခင်မင်နှစ်သက်ဖွယ်ရာ စာပေAနုပညာရှင် လူကောင်းသူကောင်းတစ်စုလည်း ရှိနေပေသည်။ သူတို့Aထဲတွင် မဒမ်ေAာ်လတီရှိုဖာသည်လည်း AပါAဝင် ဖြစ်ပေသည်။ ယခု သူသည် နှင်းဆီပျိုးခင်းသို့ ရောက်လာပြီဖြစ်၏။ သူသည် သူ့စိတ်ကြိုက် နှင်းဆီမျိုးများကို သူကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ကာ ဝီလဟမ်ကြီးAကြိုက် ရွေးချယ်သည့် စာရင်းတွင် ဇွတ် ထည့်သွင်းလေသည်။ နောင်Aခါတွင် သူ့Aပင်တွေ သေကုန်ကြပြီးလျှင် AခြားAပင်တွေ ရှင်သန် ကြီးထွားလာကြမည်ကို သိလျက်ဖြင့်ပင် Aတင်းစာရင်းထည့်၍ ဝယ်ခိုင်းခဲ့၏။ ပြီးနောက် Aချိန်Aနည်းငယ် စောသေးသည်နှင့် သူသည် မဲလစဗတ်မြို့ထဲသို့ ဝင်လျက် Aခြားဝယ်စရာ ရှိသည်တို့ကို ဝယ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။ မြို့မှာ လူရှင်းနေသဖြင့် သာယာနေ၏။ ပါးစပ် ဟောင်းလောင်းဖြင့် ဟိုငေးသည်ငေး လျှောက်ကြည့်နေကြသော တစ်မြို့သားများလည်း မရှိကြတော့။ ရေAိုင်နံဘေး လမ်းများမှာလည်း လမ်းလျှောက်သူ မရှိသလောက် ရှင်းနေ၏။ ဤရာသီကို မိုရေးကြိုက်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက နှစ်ညွန့်ပြိုင် စုလစ် မွမ်းချွန်တို့သည်။ ရှေးကထက်ပို၍ မိုးကောင်းကင်ထဲသို့ စူးဝင်နေဟန်ရှိကာ မီးမောင်းများ ထိုးထားလေ့ မရှိတော့သော ရှေးခံတပ်ဟောင်းများ တဝိုက်မှာလည်း ဟောင်းAို မှောင်မှိုင်းသည့် ပကတိAသွင်Aတိုင်း ပြန်ဖြစ်နေကြသည်။ မိုရေးသည် ကားကို သော့ပင်မခတ်ဘဲ သူ့Aကြိုက် ဆိုဗရာနီစီးကရက်များ ဝယ်ရန် ဆေးလိပ်ဆိုင်ဆီသို့ တစ်လှမ်းချင်း လျှောက်လာခဲ့၏။ ထို့နောက် နာမည်ကျော် မေယာ ကိတ်မုန့်တိုက်သို့ ကူးခဲ့ပြီးလျှင် Aမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ကွန်နက်နီကတ်ပြည်နယ် စတန်ဖို့မြို့ရှိ ဟိုးလဘရု၏ ကလေးများထံသို့ ချော့ကလက်ထုပ်ကြီး တစ်ထုပ် ဝယ်ပို့လိုက်၏။ ဤမြို့တွင် ဈေးဝယ်ရသည်မှာ ပျော်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ဘယ်ဆိုင်ဝင်လိုက် ဝင်လိုက် ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံသူများနှင့် Aပြုံးချည့်တွေ့ရသည်။ သူ၏ မသိစိတ်က နှိုးဆော်သဖြင့် သူ၏ ခြေလှမ်းများသည် လျူရှနာ ပန်းချီဆိုင်ခန်းဆီသို့ Uီးလှည့်ခဲ့၏။ စိတ်Aလိုသို့ လိုက်ခဲ့မိပြန်ပြီကောဟု တွေးမိကာ စိတ်တွင်းမှ သူ့ကိုယ်သူ ရယ်သွမ်းသွေးမိလျက် ခေတ္တမျှ ဆုတ်ဆိုင်းဆိုင်း လုပ်လိုက်မိသေးသော်လည်း ဗီလား၏ ပတ်စတယ်ခေါ် မြေဖြူခဲရောင်စုံ ပန်းချီကားကလေးကို သတိရလိုက်မိသည်တွင် သူသည် ဆိုင်ခန်းထဲသို့ ရောက်လာခဲ့လေသည်။ ပုပုဝဝနှင့် သပ်ရပ်ပြုံးရွှင်စွာ နေတတ်သော လူပါးလူနပ် လျူရှနာသည် ဘောင်းဘီရှည်Aစင်း နံနက်ခင်းဝတ် ကုတ်Aင်္ကျီတို့ကို ဝတ်ဆင်လျက် သူ၏ရုံးခန်းတွင် ရှိနေသည်။ သူက မိုရေးAား ရိုသေလေးစားစွာပင် တရင်းတနှီး ဖော်ရွေစွာ နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးနောက် ရာသီUတုAကြောင်း စကားစပ်မိကြသည်။ ရုတ်တရက် လျူရှနာက ပုံဆွဲစက္ကူပေါ်တွင် ဆွဲထားသည့် Aရုပ်ကားချပ်များကို ညွှန်ပြရင်း “ဒါတွေလဲ Aတော်ကောင်းတယ်ဗျ၊ ဈေးလဲ သက်သာတယ်၊ ကန်ဒင်စကီဟာ တော်သလောက် မကျော်ရှာတဲ့ လူ” ဟု ပြောလိုက်၏။
16. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 15 မိုရေးက ကန်ဒင်စကီကို စိတ်မဝင်စား။ သို့သော် သူသည် ထိုကားများကို ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် စေ့စပ်စွာ ကြည့်နေလိုက်မိ၏။ ထို့နောက် သူ့Uီးထုပ်ကို ကောက်ယူလိုက်ပြီးတွင်မှ “ဒါနဲ့ ကျုပ်တို့ Aရင်တစ်ပတ်က ကြည့်ခဲ့တဲ့ ဗီလားရဲ့ ကားကလေး ရှိUီးမယ် ထင်ပါ့နော်” ဟု Aမှတ်တမဲ့ မေးလိုက်သည်။ “ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုပါတော့ဗျာ” ဟု လျူရှနာက Iနြေ္ဒကြီးဖြင့် ပြော၏။ “Aမေရိကန် တစ်ယောက်က Aဲဒီကားကို သိပ်ကြိုက်နေတယ်၊ ဖီလာဒဲလဖီးယားက Aနုပညာ ပြတိုက်မှူးပေါ့” ဟု ဆက်ပြောသည်။ မိုရေးစိတ်ထဲက ထိတ်လန့်သွားသော်လည်း “ဖြီးမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာ” ဟု လှောင်ပြောင်လိုသည့် သဘောဖြင့် ခေါင်းကို ယမ်းပြလိုက်ယင်း “ခင်ဗျားက မတန်တဆ ဈေးဆိုတုန်းပဲလားဗျ၊ တကယ်တော့ ဒီကားဟာ ပတ်စတယ်လေးပဲဗျာ” ဟု ပြောလိုက်၏။ “ပတ်စတယ်က ဗီလားနိုင်တဲ့နည်းကိုဗျ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြောရင် ယုံပါဗျာ၊ ဒီကား ဒီဈေးနဲ့ရတာ တန်ပါတယ်၊ ခင်ဗျာ့နှယ် တစ်နေ့က လန်ဒန်မှာ Aလကား စထရော်ဗယ်ရီသီးကလေး လေးငါးခြောက်လုံးလောက်ကို စုတ်ချက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းကလေး သုံးလေးချက်နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ ရီနွားရဲ့ ကားတောင်မှ ပေါင်နှစ်သောင်းနဲ့ Aရောင်းAဝယ် ဖြစ်သေးတာ၊ ဒီကားကလေးက တကယ့်Aဖိုးတန် Aင်မတန်ရှားတဲ့ ကားကလေး၊ ရတနာကလေးပဲ၊ Aခု ခင်ဗျား ဝယ်စုထားတဲ့ ကားတွေထဲမှာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဝင်မယ့်ဟာမျိုး ဖြစ်နေတာတောင် ကျွန်တော်က ဒေါ်လာ တစ်သောင်းကိုးထောင်တည်းပဲ တောင်းပါတယ်၊ ခင်ဗျားဝယ်လိုက်ရင်။ Aတင်းတော့ မတိုက်တွန်းပါဘူးနော်၊ တကယ်က ဒီကားက ရောင်းပြီးသားလို ဖြစ်နေတာပါ၊ ခင်ဗျား ဝယ်လိုက်ရင် မမှားဘူးဗျ” ဆေးရောင် မသဲကွဲသည့်နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ထိုပတ်စတယ် ပန်းချီကားကလေးကို ပထမAကြိမ် သူတို့နှစ်ယောက် Aတူ ကြည့်ကြသည်။ ပန်းချီကားကလေးမှာ တကယ်ပင် ချစ်စရာကောင်းလှ၍ သူ့Aကြိုက် Aကြောင်းAရာမျိုး ဖြစ်၏။ ဇာတ်မင်းသမီးကြီး မဒမ်မီလိုနှင့် သူ၏သမီးကလေးတို့ စကားစမြည် ပြောနေကြသည့်ပုံ။ သူ၏လည်ပင်း၌ တင်းကျပ်လာ၏။ ဤကားကလေးကို သူ့Aိမ်မှာ ရှိပြီးသား စစ္စလီ၏ပန်းချီကားနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် ချိတ်ရန် သူAရဝယ်မှ ဖြစ်တော့မည်။ ရောင်းဈေးကား ထိတ်လန့်စရာဖြစ်သော်လည်း သူတတ်နိုင်ပါသည်။ သူ့မှာ ငွေကြေးပြည့်စုံပါသည်။ ထို့ပြင်လည်း နှစ်ရှည်လများ ဘာမှ Aနှစ်သာရမရှိသော Aလုပ်မျိုးနှင့် Aဆင်မပြေသော Aိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာများဖြင့် ကျင်လည်နပန်းလုံးခဲ့ရသော သူ့Aဖို့ သူလိုချင်သမျှAားလုံး မရယူသင့်ပေဘူးလော။ သူသည် ချက်လက်မှတ်ကို ရေးပေးလိုက်ပြီးနောက် ပန်းချီကားကို ချိုင်းတွင်ညှပ်လျက် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စွာဖြင့် ထွက်ခွာ လာခဲ့သည်။ ဤပန်းချီကားကလေးကို ဖရီဒါဗွန်ေAာ်လတီရှိုဖာသာ မြင်ရလျှင် တAံ့တသြ ချီးမွမ်းတော့မည်ဟု သူထင်သည်။ ************ ဖရီဒါကို သူ ၅ နာရီတွင် ဖိတ်ထားသည်။ ထိုAချိန်Aတိမှာပင် ဖရီဒါရောက်လာ၏။ ဤတစ်ခေါက်တွင် သူစီးနေကျ ဒေါ်ဖင်း ကားစုတ်ကလေးနှင့် မဟုတ်၊ ခြေကျင်လျှောက်လာသည်။ သူနေသည့် ဆီးဗတ်ရဲတိုက်ခေါ် တန်းလျားရှည်ကြီးပမာ Aိမ်Aိုကြီးသည် ရေAိုင်၏
17. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 16 တစ်ဘက်ကမ်းတွင် ရှိသည်။ Eည့်ခန်းထဲသို့ ဖရီဒါ ဝင်လာလျှင်ပင် မိုရေးက ဖရီဒါ၏ လက်နှစ်ဘက်စလုံးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ကုတို့ဖြင့် ရေAိုင်ကိုဖြတ်၍ သူ့Aိမ်ကုန်းတက်လမ်း မတ်စောက်စောက်ကြီးကို ခြေကျင်တက်လာ ကောင်းလောဟု Aပြစ်တင်သည်။ တကယ်ဆို Aာထူရိုကို လွှတ်မခေါ်ခိုင်းရပါလော။ ဖရီဒါက ပြုံးလျက် “ပါတီကို သွားတော့လဲ ရှင့်ကားနဲ့ပဲ သွားရမှာမို့ ကျွန်မကားကို ယူမလာတာပါ” ဟု ပြောသည်။ သူသည် Aင်္ဂလိပ်စကားကို ရေရေလည်လည် ပြောတတ်သည်။ Aချို့ စကားလုံးများကို ခပ်ချွဲချွဲ ခပ်ဝဲဝဲဖော့၍ ပြောသည်။ “ကဲ၊ Aခု ခင်ဗျား လက်ဖက်ရည်သောက်လိုက်Uီး၊ တော်ကြာ ရေသာသာဝိုင်ကျဲကျဲကလွဲလို့ ဘာမှရမှာ မဟုတ်ဘူး” “ရှင်က တယ်ကြိုမြင်တတ်တာကိုး” ဖရီဒါက သူ၏ လက်Aိတ်များကို ချွတ်ယင်း သိမ်မွေ့စွာ ထိုင်လိုက်သည်။ သူ၏ လက်ချောင်းများသည် ပျော့ပျောင်းသော်လည်း သန်မာသည်။ လက်သည်းများကို ပြောင်စင်နေေAာင် ပွတ်တိုက်ထားသော်လည်း Aရောင်တင်မထားချေ။ Aာထူရိုက လက်ဖက်ရည်ပွဲပြင်၍ ဘီးတပ်စားပွဲဖြင့် တွန်း၍ယူလာစU်တွင် မိုရေးသည် ဖရီဒါAား စူးစိုက်ကြည့်ရင်း Aကဲခတ်နေမိသည်။ ပျိုရွယ်စU်ကမူကား မိန်းမလှတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမည်။ AရိုးAဆစ် ပြေပြစ်သည်။ ယခု Aသက်လေးဆယ့်ငါးနှစ် ဝန်းကျင်၌ပင် လေကောင်းလေသန့် မှန်မှန်ရှူခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် သူ၏ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် တောင့်တင်းလှပလျက်ပင် ရှိသည်ဖြစ်ရာ သူသည် မိန်းမချော မိန်းမလှတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သည်။ Aထူးခြားဆုံး လက္ခဏာမှာ ညိုဝါရောင်တွင် Aစိမ်းနှောသည့် သူ၏မျက်ဝန်းတွင် Aနက်ပြောက်ကလေးများ ရှိခြင်းဖြစ်၏။ မိုရေးကAရဲစွန့်၍ ချီးမွမ်းစကားပြောခဲ့ဖူးစU် ဖရီဒါက ပြုံးလျက် “ကြောင်မျက်လုံးတွေပေါ့ရှင့်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက မကုတ်တတ်ပါဘူး၊ ကုတ်ခဲသားပဲ ဆိုပါတော့ရှင်” ဟု ပြန်ပြောခဲ့လေသည်။ ဖရီဒါသည် လောကဓံကို Aတော်ကလေး ကြုံခဲ့ရဟန်တူသည်ဟု မိုရေးသည် ကရုဏာဖြင့် တွေးနေမိသည်။ သို့သော် ဖရီဒါက သူ့Aကြောင်းကို မည်သို့သောAခါကမှ ထုတ်ဖော်ပြောမပြ။ သူ့မှာ ငွေကြေး Aလွန်ကျပ်တည်းလျက် Aဝတ်Aစားလည်း များများစားစား မရှိတော့။ သို့သော် ရှိသမျှကလေးမှာကား ပုံပန်းကျနသော Aထည်များ၊ လက်ချုပ်ဖိနပ်များမှAစ Aကောင်းစား ကလေးများ ဖြစ်ကြ၍ သူသည် ဟန်ကျပန်ကျ ဝတ်ဆင်တတ်သည်။ သူ့မျက်နှာပေးနှင့် AမူAရာAားလုံးတွင် Aထက်တန်းစားလက္ခဏာက ပေါ်လွင်လျက်ရှိ၏။ “ရှင့် လက်ဖက်ရည်ကတော့ Aမြဲတမ်းပဲ၊ သိပ်ကောင်းတာပဲရှင်” “ရွှမ်းဆီးAိုင်က ရေက နည်းနည်းလေးတော့ လက်ဖက်ခြောက်ကိုလဲ Aဲဒီရေနဲ့လိုက်ေAာင် ပြုပြင်ပြီး Aစပ်ခိုင်းရတယ်”
18. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 17 “ဘာမဆို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ေAာင် လုပ်နိုင်တာ သိပ်ကောင်းတာပေါ့နော်” ဟု ပြောလျက် Aပေါ်သို့မော့ကြည့်ယင်း တန်းလန်း တစ်စုံတစ်ခုကို မြင်၍ “O၊ ရှင် ဒါကို ဝယ်လိုက်ပြီကိုး” ဟု Aံ့Aားတသင့် ဆိုလိုက်၏။ ဗီးလားပန်ချီကားကလေးကို နံရံပေါ်တွင် ချိတ်ထားပြီးဖြစ်၏။ ဖရိဒါသည် စိတ်လှုပ်ရှားစွာပင် ထိုင်ရာမှထပြီးလျှင် ပန်းချီကားကလေးရှိရာသို့ သွားကြည့်သည်။ “ပန်းချီဆိုင်က ပြခန်းမှာထက် ဒီမှာက ပိုကြည့်ကောင်းလိုက်တာနော်၊ ခွေးခြေကလေးပေါ်က ကလေးကလဲ သိပ်ချစ်စရာ ကောင်းတာပဲနော်” ဟု ပြောပြီးလျှင် သူ့ပတ်ပတ်လည်ရှိ ရှေး ဆယ့်ရှစ်ရာစုခေတ်က Aိမ်ထောင် ပရိဘောဂများ၊ ဂေါ်ဂန်၏ပန်းချီကား၊ ဒေးဂါး၏ ကိုယ်လုံးတီး ပန်းချီကား၊ Uထြီလို၏ ပျိုရွယ်စU်က လက်ရာများကို လှည့်ပတ်ကြည့်လျက် နေ၏။ “ရှင့်Aခန်းကလေးကို ကျွန်မသိပ်ချစ်တာပဲရှင်၊ AလှAပတွေကြားထဲမှာ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် မြုပ်နှံပြီး နေလို့ရတာပေါ့၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်Aစွမ်းAစနဲ့ ကိုယ် ရထားတာတွေဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့” ဟုလည်း ပြောသည်။ မိုရေးက “ကျွန်တော်နဲ့ Aဲဒါတွေနဲ့ ထိုက်တန်ပါရဲ့လို့ေAာက်မေ့တယ်၊ ကာလသားဘဝ ကျွန်တော် စကော့တလန်မှာ နေတုန်းက ကျွန်တော်ဟာ Aင်မတန်ကို ဆင်းရဲခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောနေယင်းမှ Aနည်းငယ် စကား ထစ်ငေါ့သွားသည်။ ဆရာဝန်က သူ့ကို Aတိတ်ကAကြောင်းများကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေးပါလေနှင့်ဟု မှာထားသည် မဟုတ်ပါလော။ “ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားကတော့ စစ်ဖြစ်တဲ့Aထိ Aတော်…၊ Aတော်ကလေး ခမ်းခမ်းနားနား နေခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား” ဟု မိုရေးက ဆက်ပြောလိုက်သည်။ ဖရီဒါက ခပ်ပေါ့ပေါ့ပင် “ဟုတ်ကဲ့၊ ဟိုတုန်းကတော့ ပြည့်စုံခဲ့ပါရဲ့” ဟု ပြန်ပြောသည်။ ဤစကားများကို သူ၏ပြုံးယောင်ယောင် နှုတ်ခမ်းဖျားမှ ထုတ်ပြောလိုက်ပုံမှာ ခန့်ထည်လှသည်။ သူသည် AစU်Aဆက် ကြွယ်ဝခဲ့သော ဂျူးနွယ် မှူးမတ်ငယ် Aဆင့်ရှိသူေAာ်လတီရှိုဖာ၏ ကြင်ယာမုဆိုးမ ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားဖြစ်သူသည် စစ်ဖြစ်စAခါတွင်ပင် သေနတ်ထိ၍ သေဆုံးသည်။ ဖရီဒါသည် သူ့ယောက်ျားနှင့် Aယူဝါဒချင်း မတူသော်လည်း နောက်သုံးနှစ်ကြာ စစ်Aချုပ်စခန်းတွင် နေခဲ့ရလေသည်။ လွတ်လာသောAခါ သူ့မှာ ဆီးဗတ်ရဲတိုက်မှ လွဲ၍ ဘာတစ်ခုမှမကျန်တော့။ ဖရီဒါသည် ထိုရဲတိုက်မှာပင် သူ့ဘဝကိုသူ သတ္တိရှိစွာဖြင့် ပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့ရလေသည်။ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများက သူ၏ ကျယ်ဝန်းသော ရဲတိုက်ကြီးနှင့် ပေါင်းပင်များထလျက်ရှိသော UယျာU်သို့ ပျော်ပွဲစားသဘော Aခကြေးငွေပေး လာနေလေ့ရှိကြသည်။ ဆီးဗတ်ကို Aကြောင်းပြု၍ Aလွန်စည်းလုံးသော မိတ်သင်္ဂဟ Aသိုင်းAဝိုင်းကလေး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ “ဒီရဲတိုက်ကြီးကို ဟိုရှေးခေတ်က Aိမ်ထောင် ပရိဘောဂတွေ ပြန်ထည့်ထား၊ UယျာU်ကြီးကို ပြန်စိုက်ပြီးတော့ နဂိုAတိုင်း ဖြစ်ေAာင် လုပ်ထားရယင် သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းမှာပဲ” ဟု ဖရီဒါ တစ်ခါက ပြောဖူးသည်။ သူ့ကိုများ စကားဆွယ်နေသလောဟု မိုရေးက တွေးဖူးသည်။ နောက် သူ့ဘာသာ Aတွေးခေါင်ခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု မိုရေးဆက်တွေးခဲ့မိသည်။ ရုတ်တရက်ပင် မိုရေးက သူ၏နာရီကို ကြည့်လိုက်သည်။ “ကဲ… Aဆင်သင့်ပဲဆိုယင် သွားကြမှ ထင်တယ်“
19. mmcybermedia. com ttyyppiinngg -- nnggwweezziinnyyaaww ppddff -- lluucckkyy8822 18 သူတို့သည် ကားကြီးဖြင့် သွားကြသည်။ သူ့တွင်ရှိသမျှAနက်က Aကောင်းဆုံး Aပြာရောင်ဝတ်စုံ ဆင်ထားသော Aာထူရိုက မောင်းသည်။ ကားနောက်ခုံတွင် ဘေးချင်းယှU်၍ ထိုင်လျက် Aလယ်က ကူရှင်လက်တင်ပေါ်တွင် လက်မောင်းချင်းထိလျက် မိုရေးမှာ စိတ်ကူးယU် ရွှင်လန်းလျက်ရှိ၏။ သူ၏ Aိမ်ထောင်ရေးမှာ Aဖတ်ဆယ်မရေAာင် ပျက်ပြားခဲ့ရသော်လည်း Aလုပ်မှ Aနားယူလိုက်ကတည်းက သူ၏ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာဝီလင်းစကီး၏ ခပ်နောက်နောက် စကားAတိုင်း ‘နောက်တစ်ချီတစ်မောင်း ထပ်စမ်းကြည့်’ ဖို့ AလေးAနက် စU်းစားခဲ့ဖူးသည်။ ယခုAထိမူ သူ၏စိတ်ကူးများသည် ငယ်ငယ်နုနုကလေးများ၌သာ ကျက်စားခဲ့သည်။ ဖရီဒါမှာ မနုပျိုတော့။ သို့သော် ဖရီဒါသည် သန်မာဖျတ်လတ်သော မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်၍ သူ့မှာ မထင်မိသော ငယ်မူငယ်သွေး မကုန်သေးသူမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ Aခြားသော လူမှုကိစ္စA ဝဝတွင်လည်း သူသည် မယားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြို့ထဲသို့ ရောက်ကြသော် သူတို့သည် A များပြည်သူ့ ပန်းUယျာU်မှ ရေပန်း ရေကန် Aုတ်ဘောင်ဝိုင်းကို ပတ်မောင်းကာ ပွဲတော်ကျင်းပရာ Aနုပညာခန်းမဆောင်ရှေ့တွင် Aာထူရိုက ကားကို ထိုးရပ်လိုက်၏။ “ဒီပွဲကို သံတမန်Aဖွဲ့ထဲက ကျွန်မမိတ်ဆွေတချို့လဲ ဘန်းက တက်လာကြလိမ့်မယ် ထင်တယ်၊ ရှင် သူတို့နဲ့ တွေ့ချင်မှာပဲ မဟုတ်လား” ဟု ဖရီဒါက ပြောသည်။ မိုရေးလည်း Aတော်ပင် သဘောကျသွားသည်။ သူက ဂုဏ်မက်တတ် မဟုတ်၊ တကယ်ပင် ဂုဏ်မမက်တတ်။ သို့သော်လည်း လောကတွင် တွေ့သင့် သိသင့်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ သိကျွမ်းရမည်ကိုကား သူနှစ်ခြိုက်ပါသည်။ “ဖရီဒါက တယ်ချစ်စရာ ကောင်းတာပဲ” ဟု ရင်းနှီးစွာ စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်ယင်း ပြောသည်။ ခန်းမရှည်ကြီးမှာ လူများဖြင့် ပြည့်လျက် ဆူဆူညံညံ ရှိလှသည်။ ဤနယ်ရှိ ထင်ရှားသူ Aများစုနှင့် ပွဲတော်တွင် ဖျော်ဖြေမည့် ပညာသည်များ ရောက်ရှိနေကြ၏။ သူတို့Aား AမျိုးAမည် မထင်ရှားသည့် ခပ်နွေးနွေးသောက်စရာတစ်မျိုး လာပေးသောAခါ ဖရီဒါက မိုရေးAား စပ်ဖြဲဖြဲ Aကြည့်ဖြင့် စွေကြည့်လိုက်ရာ မျက်လုံးချင်း ဆုံမိကြသည်။ “ရှင် ပြောတာ သိပ်ဟုတ်တာပဲ၊ ရှင်တိုက်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ကလေးကို သောက်ခဲ့မိပေလို့သာပဲ၊ ရှင်နဲ့ လာခဲ့ရတာကိုလဲ ဝမ်းသာမိပါ့ရှင်” ဟု ပြောချင်သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ နောက် ဖရီဒါက မိုရေးကို သူ့လက်တံတောင်ဖြင့် AသာAယာ ဖိတွန်းလျက် လူAုပ်ထဲမှ တိုးသွားကာ ဂျာမန်နှင့် သြစတြီးယား သံAမတ်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သံAမတ်များက ဖရီဒါAား ချစ်ခင်လေးစားစွာ နှုတ်ဆက်ကြသည်ကို မိုရေးသတိပြုမိ၏။ သူတို့ ထိုနေရာမှ ထွက်ခဲ့ကြသည်တွင် ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှ ကြေးကြယ်သီးတပ် ဘလေဇာကုတ် Aပြာ သမင်ရောင် ပွရောင်းရောင်း ဘောင်းဘီရှည်နှင့် သားရေဖိနပ် ခပ်ပွန်းပွန်းတို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသော ဗြိတိသျှသားဖြစ်ငြား ဟေးလားဝါးလားနေတတ်သူ ကြည့်ပျော်ရှုပျော် သွားတုတပ်လျက် Aရက်ခိုးလျှံသော မျက်လုံးရှိသူတစ်ယောက်က ဝမ်းသာAားရေAာ်ဟစ် နှုတ်ဆက်သည်။ မိုရေးက ဝတ်ကျေတန်းကျေ ပြန်၍ လက်ပြလိုက်သည်။ ဤဒေသမှ သတင်းစာတစ်စောင်တွင် Aာဝဇ္ဇန်း ရွှင်ရွှင်ဖြင့် ခပ်စပ်စပ်ကလေး Aဖျားခတ်တုပ်တတ်သည့်
မြန်မာနှင့်ဥဒေါင်း - စောမုံညင်း